गर्भवति रहेकी भारतीले मागेपछी सलमान खानले दिए करोडौंको सम्पत्ति, आफु बस्ने फार्महाउस समेत दिए ! – List Khabar
Home / समाचार / गर्भवति रहेकी भारतीले मागेपछी सलमान खानले दिए करोडौंको सम्पत्ति, आफु बस्ने फार्महाउस समेत दिए !
admin January 31, 2022 समाचार Leaveacomment 81 Views
बलिउडका भाइजान अर्थात् सलमान खानका लागि सबैजना पागल छन् । फ्यानहरु उनको एक झलक पाउन आतुर छन् । योसँगै भाइजानले आफ्ना फ्यानलाई माया पनि दिइरहेका छन् । हाल सलमान फिल्मबाट टाढा बिग बोस १५ मा दर्शकलाई मनोरञ्जन दिइरहेका छन् । टिभीको चर्चित रियालिटी शो बिग बोस १५ को ग्रान्ड फिनाले नजिकिँदै छ ।
जसका कारण दर्शकको उत्साह बढेको छ । तर चर्चामा आउनुको अर्को कारण पनि छ । वास्तवमा, शोका एकमात्र होस्ट सलमान खानले आफ्नो करोडौंको फार्महाउस कमेडी क्वीन भारती सिंहलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेका छन्। यो सुनेर सबै अचम्ममा परेका छन् । साथै, भाइजानले आफ्नो बंगला भारतीलाई दिन किन भनेका हुन् भन्ने प्रश्न पनि मानिसहरूको मनमा छ । आज त्यहि प्रश्नको जवाफ दिन गइरहेका छौँ । जसरी तपाईलाई थाहा छ विगतमा भारती सिंह आफ्ना पति हर्ष लिम्बाचिया सँग बिग बोसमा पुगेकी थिइन् ।
सो क्रममा त्यहाँ उद्योगका चर्चित अभिनेता मिथुन पनि उपस्थित थिए । जहाँ भारतीले ठट्टा गर्दै सलमानको अगाडि आफ्नो फार्महाउस मागेकी थिइन् । यस्तो अवस्थामा सलमानले पनि बिना कुनै हिचकिचाहट भारतीको माग पूरा गर्दै फार्महाउसका लागि स्वीकृति दिएका थिए । यो सुनेर त्यहाँ उपस्थित मानिसहरु र दर्शकहरु पनि छक्क परे ।
यो सलमानको त्यही फार्महाउस हो जहाँ सलमान आफ्नो अधिकांश समय बिताउँछन् । उनको हरेक पार्टी त्यही फार्महाउसमा हुन्छ । यसका साथै उनी फुर्सदको समयमा यहाँ बस्न पनि रुचाउँछन् । उनी यस फार्महाउससँग कत्तिको संलग्न छन् भन्ने कुरा यिनै कुराबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ । भारतीले आफ्नो फार्महाउसको माग किन राखिन् र भाइजानले किन छिटो राजी गरे त ?
उल्लेखनीय छ, भारती सिंह गर्भवती छिन् र छिट्टै बच्चालाई जन्म दिनेछिन् । यस्तो अवस्थामा जब उनी बिग बोसको स्टेजमा पुगिन्, उनले सलमानलाई भाइजानको फार्महाउसमा आफ्नो बच्चाको पहिलो नुहाउने कार्यक्रम गर्न चाहेको बताएकी थिइन् । यो सुनेर भाइजान पनि राजी भए । यस्तो अवस्थामा यो विषय जनतामा चर्चाको विषय बनेको छ ।बलिउडका भाइजान अर्थात् सलमान खानका लागि सबैजना पागल छन् । फ्यानहरु उनको एक झलक पाउन आतुर छन् । योसँगै भाइजानले आफ्ना फ्यानलाई माया पनि दिइरहेका छन् । हाल सलमान फिल्मबाट टाढा बिग बोस १५ मा दर्शकलाई मनोरञ्जन दिइरहेका छन् । टिभीको चर्चित रियालिटी शो बिग बोस १५ को ग्रान्ड फिनाले नजिकिँदै छ ।
उल्लेखनीय छ, भारती सिंह गर्भवती छिन् र छिट्टै बच्चालाई जन्म दिनेछिन् । यस्तो अवस्थामा जब उनी बिग बोसको स्टेजमा पुगिन्, उनले सलमानलाई भाइजानको फार्महाउसमा आफ्नो बच्चाको पहिलो नुहाउने कार्यक्रम गर्न चाहेको बताएकी थिइन् । यो सुनेर भाइजान पनि राजी भए । यस्तो अवस्थामा यो विषय जनतामा चर्चाको विषय बनेको छ ।
Previous शरीरमा देखिएका यी लक्षण हुन् छिटो मृत्युको चेतावनी चिन्ह, कतै तपाईलाई त देखिएको छैन ?
Next …त्यसपछि उनलाई त्यो अवस्थामा देखेपछि मन थाम्न सकेनम….! २ मिनेट समय दियर पधुनु होस।।